Chitatu, Nyamavhuvhu 5, 2020
Fabre d'Olivet: murume mutsva achibuda mumapako anoonana nemashuga matsva
Nemakore ekushanda akatarisa kusvika kwegumi nemasere uye pakutanga kwezana remakore regumi nemapfumbamwe, theosophist akanga aunganidza zvinyorwa zvakawanda pamusoro pezveNhoroondo yePasi, pamusoro pemamiriro ayo anoifukidza, uye pane humunhu inokura ipapo. Akaiswa zvishoma nezvishoma vasati vaona uchapupu hwekusakwanisa kuparidzira ruzivo rwakadai rwekudzidzira uye ruzivo, Fabre d'Olivet aifanira kugadzirisa kuzvidzora pakuonekwa muna 1822 (akanga ari makore 55) mabhuku maviri akazvipira kune nhoroondo yemapuranga kubva kumagumo akare zvikuru, achitarisa kuisanganisira zvose zvine chokuita nehupfumi hwevanhu, nemhando dzakasiyana dzehurumende. Chibereko chekudzidza kwake kwose nekutsvakurudza kunoita fresco iyi "historico-philosophy" chikamu chakakosha chebasa rake. Kubva pamabviro emadzinza evanhu, inopa tsanangudzo uye uchapupu, nekugadziriswa kwemashoko kana anymological analogies. Panguva iyo yakabudiswa, hapana basa mune zvematongerwo enyika nehuzivi hwevanhu vangaenzaniswa naro; kunyange nhasi, anenge mazana maviri emakore gare gare, iyi sum amamée nemunyori weVer Dorés, inoratidzika kunge iri tsanangudzo yakaisvonaka kwazvo inogona kunyorwa panzvimbo iyo, basa, yapfuura, iripo kana ramangwana, reMunhu muUpasi.
Nhanganyaya yekutanga chikamu chebhuku
Iyo chena nhambo chinhu chebasa rake sekureva kwaFabre d'Olivet
Iyo yekudzungaira, yemusango, isina chena nhangemutange… rudzi rwevatema kupfuura ivo vaitonga pasi
"Panguva ino, iyo inotevera zuva randichazotsvaga kutsvaga, White Race rakanga risina simba, rakashata, risina mitemo, risina ruzivo, risina tsika yerudzi rupi zvarwo, risina chiyeuchidzo, uyewo risina kunzwisisa kunzwisisa tariro.
Aigara munharaunda yechipfuva, kubva kwaakanga atanga. Rudzi rwakasviba, rukuru kudarika iro, rwakadaro rwakatonga pasi, uye rwakabata tsvimbo yesayenzi nesimba: iyo yakanga ine dzose dzeAfrica uye dzakawanda dzeAsia apo dzaive varanda uye dzakamanikidza rakati rutsvuku [....] ... uye, sezvandakambotaura (p.81), White Race, iyo yakanga ichangobva kuberekwa, yakatenderera yakakomberedza danda re ... "
Fabre d'Olivet anotumidza chena dzinza "Borean" uye dema nhange "Sudéen". Anobva atambura kutsanangura nzvimbo nenzvimbo zvevachena
"Zvechokwadi zvakaoma zvikuru kutaura panguva iyo White kana Hyperborean Race yakatanga kusangana nemamwe marudzi ehupfumi, uye kunyange zvishoma pane izvo zvakatevera nguva yakatanga kuvapo ..."
"... tinowana zana kazana zita reHyperboreans mune zvinyorwa zvekare, uye hapana chero chikonzero chakanaka pane account yavo. Maererano naDiodorus Siculus, nyika yavo yaiva yepedyo nemwedzi ... "(P.82)
"The rudzi dema parohwa dzakatangira pedyo neequator, uye rapararira kubva ipapo kusvika kondinendi African kubva iyo ipapo akawedzera kwayo nesimba panyika yose uye White Race pachayo pamberi iye aiva nesimba rokupopotedzana naye. "
"Zvinogoneka kuti munguva iri kure, Black Race yainzi South Australia kana Suthean, sezvo White Race yainzi Borean, Guiborean kana Hyperborean ..."
Kutanga kweBorean White Race pedyo nemhuka yemhuka
"... Ngationei kuti chii chakanga chiri kutanga kwekubudirira munhangemutange yeBorean, iyo yandinofunganya chete."
Zvinotoneka kuti panguva iyo rudzi urwu rwakaonekwa panyika, mumhando dzakanyanya pedyo neyezvizhinji zvezvipenyu zvezvipfuwo, zvinogona, pasinei nekusiyana kwakakwana kwaro, uye zvinopesana nemafungiro ayo, kuti varambe vachivhiringidzika kwenguva refu pakati pavo. "
Fabre D'Olivet anotsanangura masimba matatu makuru eUniyo, izvo zvaanotora kubva kuPythagoras. Aya matatu masimba makuru ndiProvidence, Destiny uye kuda kweMunhu.
“Rudzi rwevatema rwandinogara ndichidaidza kuti Sudéen nekuda kwechikonzero chekutanga uye mukupokana nerudzi rwevachena randakatumidza Boréen; rudzi rwevatema, ndinodaro, rwaivapo mune zvese zviitiko zvepamusoro zverunyararo. Yakafukidza iyo Africa yese nenyika dzesimba dzinobva kwairi, yaive neArabia uye yaive yakakura dzimba dzayo kumatunhu ese ekumaodzanyemba eAsia uye kure kwazvo mukati. Iko kusinganzwisisike kwezvivakwa zvekare izvo zvichine hunhu hweAfrica, achiripo nanhasi munzvimbo idzi dzose uye zvinosimbisa ukuru hwevanhu vavakabva. Kuvakwa kukuru kweMahabalipouram, mapako eEllora, tembere dzeIsthakar, ramparts yeCaucasus, mapiramidhi eMemphis, kucherwa kweThebes uye mamwe mabasa mazhinji ayo fungidziro inokatyamadza inopa kune Giants, zvinoratidza kureba kweSouthean Race uye kufambira mberi kukuru kwavakaita muunyanzvi ”.
“…. Nhabvu inesimba kwazvo yeSouth Korea, yakapararira kwazvo muAfrica uye kumaodzanyemba kweAsia, vaingoziva zvisina kukwana matunhu ekuchamhembe eiyi chikamu chenyika uye aingova neyakajeka pfungwa yeEurope (…) ”
“Ivo vachena vakaona kekutanga, muchiedza chesango ravo rakapiswa, varume vane rumwe ruvara kubva kwavo.
Asi mutsauko uyu hauna kuvabata vega. Varume ava, vakafukidzwa nenguo dzakatanhamara uye zvidzitiro zvechipfuva zvinopenya, zvine hunyanzvi vakabata zvombo zvakakurisa, zvisingazivikanwe mumatunhu aya. Vakanga vane mabhiza mazhinji; vakarwa pamatangi uye kunyange neshongwe dzinotyisa dzaikwira senge colossi, vakatanga rufu kubva kumativi ese. Kufamba kwekutanga kwaive kwekuita stupor.
Vamwe vakadzi vachena, vakabatwa nevanhu ava vasingazivikanwe uye vavakatsvaga kutora hunyoro, hazvina kuoma kunyengerera. Vaive vasina kugadzikana zvakanyanya kumusha kwavo chaiko kuve nekuraramisa rudo. Kudzoka mudzimba dzavo, vakaratidza mitsipa inopenya, machira akaonda uye akanakisa avakange vagamuchira. Izvo hazvina kutora chero mukana kusimudza misoro yevamwe vese. Nhamba huru inotora mimvuri yehusiku, vakatiza ndokuenda kunobatana nevanyowani. Madzibaba, varume vanoteerera chete kugumbuka kwavo, vakatora zvombo zvavo zvisina simba ndokukwira kunotora vanasikana vavo kana vakadzi vavo. Isu takanga tafanoona mafambiro avo; isu tanga takavamirira. Hondo yakatanga, mhedzisiro yanga isiri mukusahadzika. Vanoverengeka vakaurayiwa, chiverengero chikuru chakaramba chiri vasungwa; vakasara vakatiza "
Kuonekwa kwe2 mapoka okutanga evanhu pakati pevaBoreans: vanokudzwa uye kukwira.
VaSude vanobatanidza nyika dzeBorean
“Zvese zvakatengesa Race Rakaipa, uye zvaiita sekutitungamira kurasikirwa kwazvo. Kunyangwe vakadzi veBorean vakavasiya sevakakunda ”
VaSude vanobatanidza nyika dzeBorean uye vanotarisana nemamiriro ekunze kunotonhora
Henry Sampson, mugadziri weAfrica American wefoni
Saka akataura Zarathustra - Friedrich Nietzsche (Audio)